Cities-Weather « MMWeather Information BLOG
စက်တင်ဘာ ၁၇ ရက် အထိ ၇၂ နာရီ မိုးရွာသွန်းနိုင်မည့် အခြေအနေ
Leaveacomment ကွန်ပျူတာမော်ဒယ်ခန့်မှန်းချက်, မိုးရွာသွန်းမှုခန့်မှန်းခြေ, မိုးရွာနိုင်ခြေဇယား 72hr rainfall forecast ရန်ကုန်နှင့်ပဲခူးအနီး မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေများ TRMM
Leaveacomment မိုးရွာနိုင်ခြေဇယား BAGO, Yangon Yangon Weather at 2PM – 14 JUNE 2012
By mmweather.ygn, on June 14th, 2012%
Updated: 2:00 PM MMT on June 14, 2012 Observed at Yangon, Myanmar Temperature 91°F / 33°C Humidity 59% Dew Point 75°F / 24°C Wind SW at6mph /9km/h Pressure 29.74 in / 1007 hPa (Steady) Conditions Mostly Cloudy Visibility 5.0 miles / 8.0 kilometers UV 8 out of 16 Clouds Mostly Cloudy (BKN) : 1800 ft / . . . → Read More: Yangon Weather at 2PM – 14 JUNE 2012
Leaveacomment Cities-Weather Yangon weather မေလ ၂၇ ရက်မှ ဇွန်လ ၁၀ ရက်အထိ မိုးရွာသွန်းနိုင်ခြေပြဇယား
By mmweather.ygn, on May 27th, 2012%
မြန်မာနိုင်ငံ မြို့ကြီးအချို့အတွက် မေလ ၂၇ ရက်မှ ဇွန်လ ၁၀ ရက် အထိ မိုးရွာသွန်းနိုင်ခြေပြဇယားများကို စုပေါင်း တင်ပြလိုက်ပါသည်။
ပုံငယ်များပေါ်တွင် mouse တင်ပေးခြင်းဖြင့် မြို့ကြီးအမည်များပေါ်လာပါမည်။ Mouse Over on thumbnails to view city name.
Leaveacomment မိုးရွာနိုင်ခြေဇယား cities precipitation chart ရန်ကုန်-13-27MAY မိုးရွာနိုင်ခြေနှင့် အပူချိန်
By mmweather.ygn, on May 13th, 2012%
ရန်ကုန်မြို့လယ်နှင့် ရန်ကုန် မင်္ဂလာဒုံအတွက် မေလ ၁၃ ရက်မှ မေလ ၂၇ ရက်အထိ မိုးရွာသွန်းနိုင်ခြေနှင့် အပူချိန် ဖြစ်နိုင်ခြေပြ ဇယားဖြစ်ပါသည်
Leaveacomment မိုးရွာနိုင်ခြေဇယား, အပူချိန်ပြဇယား precipitation, temperature မေလ ၁၀ ရက်မှ ၂၄ ရက် အထိ မြို့ကြီးအချို့ မိုးရွာနိုင်ခြေဇယား
By mmweather.ygn, on May 10th, 2012%
One comment မိုးရွာသွန်းမှုခန့်မှန်းခြေ, မိုးရွာနိုင်ခြေဇယား ၁၀-၂၄ မေလ 5APR2012+2days
Leaveacomment Cities-Weather Yangon Yangon Weather Forecast – 4APR2012
Leaveacomment Cities-Weather Yangon, ရန်ကုန် မြို့ကြီးအချို့ ရာသီဥတု ခန့်မှန်းချက် – ၂၉-၁-၂၀၁၂
By mmweather.ygn, on January 29th, 2012%
မြန်မာနိုင်ငံ အောက်ပိုင်းဒေသများတွင် ညအပူချိန်များ တိုးလာတော့မည်။
အရှေ့တောင်အာရှ ဒေသတွင်းညအပူချိန် ဖြစ်နိုင်ခြေပြပုံ (ဇန်နဝါရီ ၃၀ ရက် နံနက် မြန်မာစံတော်ချိန် ၀၆၃၀ နာရီအထိ)
ပုံအညွှန်း -15 °C မှ0°C (အပြာနု၊ မိုးပြာ၊ အပြာရင့်)0°C မှ5°C (အစိမ်းပုတ်)5°C မှ 15 °C (အစိမ်းရင့်၊ အစိမ်း နှင့် အစိမ်းနု) 20 °C မှ 30 °C (လိမ္မော်နု၊ လိမ္မော်၊ လိမ္မော်ရင့်) 30 °C မှ 45 °C (အနီနု၊ အနီ၊ အနီရင့်)
. . . → Read More: မြို့ကြီးအချို့ ရာသီဥတု ခန့်မှန်းချက် – ၂၉-၁-၂၀၁၂
Leaveacomment Cities-Weather မြို့ကြီးအချို့ ရာသီဥတု ခန့်မှန်းချက် – ၂၃-၁-၂၀၁၂
By mmweather.ygn, on January 23rd, 2012%
အရှေ့တောင်အာရှ ဒေသတွင်းညအပူချိန် ဖြစ်နိုင်ခြေပြပုံ (ဇန်နဝါရီ ၂၄ ရက် နံနက် မြန်မာစံတော်ချိန် ၀၆၃၀ နာရီအထိ) ပုံတွင် ဇန်နဝါရီလ ၂၄ ရက် နံနက် တွင် ဖြစ်နိုင်မည့် အပူချိန်များကို အရောင်ဖြင့် ဖေါ်ပြထားပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ အထက်ပိုင်းဒေသများတွင် အပူချိန်များဆက်လက်ကျဆင်းနေမည့် အခြေအနေကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါမည်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း တွေ့မြင်ရမည့် အပူချိန်များ –5°C မှ 15 °C အတွင်း (အစိမ်းရောင်ရင့်၊ အစိမ်းရောင် နှင့် အစိမ်းရောင် အနု) 20 °C (လိမ္မော်ရောင်အနု)
ရန်ကုန် မန္တလေး နေပြည်တော် – ပျဉ်းမနား မြစ်ကြီးနား မုံရွာ Today 33 °C . . . → Read More: မြို့ကြီးအချို့ ရာသီဥတု ခန့်မှန်းချက် – ၂၃-၁-၂၀၁၂
Leaveacomment Cities-Weather Older Entries »